Zambia: Fanabeazana Amin’ny Ambaratonga Voalohany Ho An’ny Rehetra, Ary Ny Tohiny? · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Celine Arnoldi
Voadika ny 22 Desambra 2017 14:54 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Italiano, Français, Español, English
Fianarana ao amin'ny tanàna iray ao Zambia. Sary an'i Jurvetson teo amin'ny Flickr (CC BY 2.0)
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny Aogositra 2013
[rohy amin'ny fiteny anglisy] Araka ny fanasokajiana ny tahan'ny fahaizana manoratra ao Afrika izay navoakan'ny The African Economist, tamin'ny volana Jolay 2013, firenena 37 amin'ny 52 ao Afrika no nahatratra ny taha maherin'ny 50% tamin'izany, raha toa ka firenena 17 ankehitriny no ambonin'ny 70%.
Ho an'ny kaontinanta iray izay voakilasy ho toy ny mahantra indrindra, ny fahazoana vokatra sahala amin'ireo dia manome fanantenana hoe mety hitohy hiakatra hatrany ny tahan'ny fanabeazana sy ny fampianarana manoratra noho ireo ezaka mafy atao. Ny fepotoanan'ny taona 2015 dia tonga mba hanatanterahana ireo Tanjona valon'ny taonarivo ho an'ny fampandrosoana (OMD) napetraky ny ONU, anisan'izany ny fahazoan'ny rehetra ny fanabeazana amin'ny ambaratonga voalohany.
I Zambia, izay mitana ny laharana faha-17 ao Afrika ahitana olona 80% mahery kely nandia sekoly, dia afaka hampiakatra ny toerana misy azy raha toa mitondra vokatra mba hanatsaràna ny fanabeazana ireo ezaka ankehitriny ataon'ny governemanta, ireo fikambanana tsy miankina ary ireo olona tsirairay.
Na eo aza ireo fandrosoana vita tamin'ny resaka fanabeazana sy ny fitombon'ny isan'ireo anjerimanontolo ao Zambia, mbola olana mipetraka hatrany ny taha ambany ho an'ny fanabeazana, ny fahamaroan'ireo mpianatra ràraka tsy afaka mandroso eo amin'ny sehatry ny fampianarana.
Fianarana, ary rehefa avy eo?
Tahirin-kevitra iray an'ny OCDE mampiseho ireo tarikevitra mikasika ny fanabeazana ho an'ny sehatra fampandrosoana taty aorian'ny taona 2015 no manosoka hevitra fa ireo tanjona sy ireo fepetra mikasika ny fanabezana dia tena manandanja raha vao tratra ny fahazoan'ny rehetra miditra amin'ireo sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa. Marihan'ny OCDE fa na teo aza ireo ezaka fampidirana an-tsekoly sy ny fahazotoana maneran-tany hatramin'ny nanombohana ny fanentanan'ny OMD tamin'ny taona 2000, maro ireo tanora no nanohy niala tamin'ny fianarana nefa tsy manana akory ny fahalalana sy fahaizana ilain'izy ireo amin'ny fahitàna asa sy fivelarana.
Tao Zambia tamin'ny taona lasa, mpianatra manakaiky ny 60.000 no tsy afaka tamin'ny fanadinana famaranana ny ambaratonga voalohany tamin'ireo 337.706 niatrika fanadinana . Raha naneho hevitra tamin'ilay lahatsoratry ny Musaka Times mikasika ireo vokatra azo tamin'io fanadinana io, dia mpamaky iray Chongo B.C, no nanoratra hoe :
Tena nahatalanjona ireo vokatry ny fanadinana famaranana ny ambaratonga voalohany ho an'ny taona 2012 raha oharina tamin'ireo taona teo aloha. Fanatsarana lehibe izany. Na izany aza, ny governemanta, tamin'ny alalan'ny Minisitry ny fanabeazana, ny siansa, ny fiofanana arak'asa sy ny ankizy madinika dia tokony hanome antoka fa hanolotra sehatra ampy an'ireo mpianatra mba hianarana amim-pahombiazana. Ambonin'izany rehetra izany, tokony hampihena ny fifandanjan'ny isan'ireo mpianatra isaky ny mpampianatra iray isan-dakilasy mba hiantohana tontolom-pampianarana sahaza. Hiantoka ny fanabeazana tsara kalitao izany ary olom-pirenena mavitrika sy ilain'ny fiaraha-monina.
Mpamaky iray hafa, Xhoisan X no nanontany mikasika ny iray tamin'ireo politika izay tena dokadokafan'ireo fanjakana nifanesy:
Azafady, ampianaro aho. Izao vao mazava amiko fa manomboka izao dia tsy azo ialàna ny fanabeazana hatreo amin'ny ambaratonga faharoa aty Zambia. Ary koa, maneho inona ireo vokatra [nomen'ny minisitry ny fanabeazana?]
Raha toa ratsy ny taham-pivoaran'ny sekoly ambaratonga voalohany, dia ny sivana tamin'ny kilasy fahadimy no mandefa mpianatra marobe hikarenjy eny rehetra eny. Araka ny voalazan'ny Times of Zambia, mpiadina 100.824 monja no afaka tamin'ireo mpianatra 291.018 nanala ny fanadinana tamin'ny taona 2012.
Maro ireo antony izay mandona ny fandrosoan'ireo mpianatra hatrany amin'ny fampianarana ambaratonga ambony, fa ny olana tena hita ho manandanja indrindra dia toa ny tsy fahampian'ireo toerana fampianarana any amin'ireo kilasy madinika, miaraka amin'ny isan'ny mpianatra / mpampianatra ao Zambia, izay 1 hatramin'ny 63 tamin'ny taona 2011 araka ny voalazan'ny Banky Iraisampirenena.
Nirosoan'ny governemanta ny fanamboarana efitrano fampianarana marobe ho an'ny kilasy amin'ny ambaratonga voalohany, faharoa ary ambaratonga ambony mba handraisana mpianatra maro kokoa sy mpampianatra araka izay zaka. Tamin'ny fitokanana sekoly iray tany amin'ny faritra ambanivohitra tao Zambia, tamin'ny taona lasa, nilaza ny Filoha Michael Sata fa:
Ny tanjonay dia ny hanangana rafitra fanabeazam-bahoaka voarindra, misy kalitao sy azo antoka amin'ny alalan'ireo fampiasambola betsaka ao anatin'ny fotodrafitrasa fampianarana. Amin'ny maha-governemanta, manana andraikitra izahay handamina sy hamolavola ny hoavin'ny vahoakanay amin'ny ankapobeny, indrindra fa ireo olom-pirenena tanora indrindra, izay manome ny maro amin'ny vahoakanay.
Tamin'ny taona 2011, nasehon'ny Filoha Sata ihany koa ireo tetikasan'ny governemantany amin'ny hananganana ireo anjerimanontolo, tao anatin’ny lahateny fanokanana nataony teo anoloan'ny Parlemanta , ary hatramin'izao izy dia mirotsaka amin'ny fanamboarana ny Anjerimanontolon'i Palabana, toeram-piofanana fahiny momba ny ronono, ny Anjerimanontolo Chalimbana, izay sekoly fanofanana mitohy ho an'ireo mpanabe, ary ny Anjerimanontolon'i Robert Makasa izay Misiona Lubwa fahiny. Manampy ireo anjerimanontolo telo an'ny fanjakana efa nisy teo aloha ireo anjerimanontolo vaovao ireo, ny Anjerimanontolon'i Zambia, ny Anjerimanontolon'i Copperbelt sy ny Anjerimanontolo Mulungushi.
Na manao ezaka aza ny governemanta, misy maro ireo sakana izay mitarika ny olona tsy hahazo fanabeazana, anisan'ireo ny fahantrana goavana izay miantraika amin'ireo fianakaviana marobe.
Mijery ny hoavy
Araka ny fanamarihan'ny OCDE, raha toa ka voatazona ny maha-zava-dehibe ny fahazoan'ny rehetra fanabeazana amin'ny ambaratonga voalohany, ny tanjona iray taorian'ny taona 2015, mifamatotra amin'ny fanabeazana dia ny fampidirana ny lentan'ny ambaratonga faharoa sy fampidirana fifantohana henjana eo amin'ny lafiny fizàrana asa. Ny OCDE ihany koa dia manohana ny Fandaharanasa fanombanana ireo mpianatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena (PISA) izay ahafahan'ireo firenena mampitaha ny vokatra avy amin'izy ireo tsirairay avy.
Afaka manontany tena hoe ahoana ny fomba hahatratraran'i Zambia an'ireo fenitra ireo, saingy dingana iray fara-fahakeliny no efa vita amin'ny resaka fotodrafitrasa. Ny fanamboarana ireo sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa dia hifanaraka indrindra amin'ny fotoana famoronana ireo anjerimanontolom-bahoaka, ampivadiana amin'ny fiofanana sy ny fampidirana mpanabe maromaro kokoa.
Eo amin'ny sehatry ny tsirairay, raha jerena ny zava-tsarotra manjo ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana mahantra, vehivavy Zambiana iray monina ao Etazonia, Isabella Mukanda Shamambo, no nanangana foibe fampianarana atao hoe “Lavidavitra kokoa noho ny fanabezana amin'ny ambaratonga voalohany ho an'ny rehetra”, izay BUPE no fanafohezana azy (midika hoe “fanomezana” ao amin'ireo fiteny zambiàna sasantsasany). Tamin'ny fanolorana ny tetikasa tao amin'ny tranonkalan'ny Community Prayer Centers, manoratra izy hoe:
Ny fahombiazana manakaikikaiky azon'ny iray tamin'ireo tanjon'ny taonarivo ho an'ny fampandrosoana napetraky ny ONU dia namela taranaka miaraka amin'ny haavom-pahaizana hatreo amin'ny faran'ny ambaratonga voalohany hirenireny eny andalam-be rehetra eny any amin'ireo tanàndehibe marobe, indrindra fa ao Afrika atsimon'i Sahara. Ankehitriny, misy ny filàna fanabeazana amin'ny ambaratonga faharoa ho an'ny rehetra izay tsy ny olona rehetra no afaka mahazo azy. Mirenireny eny andalamben'i Ndola [tanànan'i Zambia] ireo ankizy mivarotra harona plastika ao anaty fanantenana ny mba ho tafaverina indray amin'ny kilasy faha-6. Mirenireny eny andalam-be ireo sasany, manantena hoavy mamiratra izay very tanteraka.
Ny politika tena mivoatra izay nambaran'ny governemanta zambiàna tamin'ny taona 2012 dia ny fanavaozana ny ireo 1.570 antsoina hoe sekolin'ny vondrom-piarahamonina tantanin'ireo ONG ny ankamaroany mba hamaliana ny filàn'ireo vondrona marefo avy amin'ireo faritra tena mahantra indrindra amin'ireo toerana an-drenivohitra sy manodidina ny renivohitra. Mikendry ny hahatratrarana ireo tanjon'ny taonarivo sy ny lavidavitra kokoa izany.
Mba hilazana zavatra mitombina, miaraka amin'ny fahatanterahan'my fahazoana fanabeazana ambaratonga voalohany ho an'ny rehetra tsy misy hatak'andro, ao Zambia manokana sy ao Afrika amin'ny ankapobeny, tsy maintsy mivonona isika hanao dingana azo antoka hihoatra an'ireo Tanjon'ny taonarivo ho an'ny fampandrosoana tamin'ny taona 2015, mba hifantohantsika amin'ny fanatsarana ireo fandaharam-pianarana sy hampiroboroboana ny fahazoana fari-pahalalàna ambony kokoa.
Ampahany amin'ny andiany iray nosoratan'ireo blaogeran'ny Global Voices ho an'ny OCDE ity lahatsoratra ity, mikasika ireo hevitra fampiroboroboana manerantany taorian'ny taona 2015. Tsy tomponandraikitra amin'ny votoantin'ireny lahatsoratra ireny ny OCDE.
Jereo ny vavahadin-tserasera Wikiprogress taorian'ny 2015 hahazoana fanampim-panazavana bebe kokoa momba io raharaha io.